बिहीबारदेखि 'गभर्मेन्ट सटडाउन'! - लुम्बिनी सञ्चार लुम्बिनी सञ्चार
बिहीबारदेखि ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’!
प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०७८, मंगलवार १५:४५
सरकारले राजस्व उठाउनका ल‌ागि भदौ २५ गते नै सामयिक कर असुल ऐन-२०१२ को सूचित आदेश जारी गरिसकेको छ । संसदमा पेश्की खर्च विधेयक नै पेश नगरिएकाले खर्च भने गर्ननसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
#बिहीबारदेखि 'गभर्मेन्ट सटडाउन'!